Wax ka baro mid ka mid ah hogaamiyayaasha ugu caansan caalamka - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
→ Wax ka baro mid ka mid ah hogaamiyayaasha ugu caansan caalamka
iftineducation.com - Magaciisa oo buuxa waa Raccep Tayyip Erdogan. Waxa uu ku dhashay magaalada Istanbul 26-kii February 1954. Waa madaxweynihii 12-aad ee Turkey. Muddadii u dhexeysay 1994 iyo 1998 waxa uu ahaa duqa magaalada Istanbul. 2003 ilaa 2014 waxa uu ahaa ra’iisulwasaarihii 36aad ee Turkiga.
Sanadkii 2001 Erdogan waxa uu aasaasay Xisbiga Caddaaladda iyo Sinnaanta AKP, kaas oo saddex jeer oo is xiga ku guuleystay doorashooyinkii guud ee dalkaas ka dhacay sanadihii 2002,2007 iyo 2011.